Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဆိုသည်မှာ.....
by James Mmt on Thursday, 10 May 2012 at 17:33 ·
ကျွန်တော် ပထမ ရေးထားတဲ့ စာကို ဖတ်ပီးသူတိုင်း ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှေးယခင်ကပင် တည်ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည် သဘောပေါက် လက်ခံမှာပါ….. ဒီလောက် ကမ္ဘာမှာ စည်းနဲ့ စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တစ်လုံး တစ်ပါဒမျှ မတွေ့ရပဲ လွတ်လပ်ရေးနှောင်းပိုင်းမှ မူဂျာဟစ်တွေ တောင်းဆိုမှုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ထောင်းလမောင်းထလာတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်မှန်း သိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
ပါကစ္စတန်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရယ်လို့ ခွဲထွက်ပီးတဲ့ အခါမှာတော့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောကို အာသာငန်းငန်းနဲ့ လိုချင်ဇော ပြင်းပြလာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွေဟာ မူဂျာဟစ်တွေကို လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးပီး တကျော့ပြန် သောင်းကျန်းမှုကို အစပြုစေခဲ့ပါတယ်……. မြန်မာကမ်းရိုးတန်း ဒီလောက် ရှည်လျားတာမယ် ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမှာသာ ဒီ လူမျိုးရေး ပြဿနာ ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိရင် ဒီကိစ္စတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ ပါတ်သက်မှုတွေကို အထင်အရှားတွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်……
လူမျိုးတစ်မျိုးမှာ စာပေ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း ဆိုတာ အတိအကျကို ရှိပါတယ်…. အခုလက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာတွေ သုံးနှုန်းသော ဘာသာစကား၊ စာပေ အတိအကျ ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိပါဘူး…. အာရပ်တွေ သင်္ဘောပျက်လို့ ရောက်လာလျင် အာရပ်စကားသာ သုံးနှုန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. သိုရာတွင် ယခု ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ သုံးနှုန်းနေသည်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ ဘင်္ဂါလီတို့ သုံးနှုန်းတဲ့ ဘာသာစကားသာ ဖြစ်ပါတယ်….. ယဉ်ကျေးမှု အနေနဲ့လည်း မယ်မယ် ရရ ပြစရာ မရှိသလို၊ သမိုင်း ဆိုသည်မှာလည်း လိမ်လည်ရေးသား နေကြသဖြင့် တစ်ယောက် တစ်ပေါက်နှင့် အမြှီးအမေါက် မတည့်တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဆိသည့် လူမျိုးသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ လာသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး….
ဒါဆိုရင် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ လူသားခြင်း စာနာထောက်ထား သင့်တယ်လို့ပြောလာတယ်…. သူတို့ကော လူမဟုတ်ဘူးလားလို့ ပြောလာကြတယ်….. အခုလည်း လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားတဲ့အပြင် ဘူးသီးတောင် မောင်းတော ဒေသဟာ မြန်မာပြည်မှာ INGO တွေ ဒုတိယ အများဆုံး ရုံးစိုက်ရာ ဒေသလို့တောင် သတ်မှတ်လို့ ရလောက်အောင် နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေ ရုံးစိုက် လုပ်ကိုင်နေတာ အထင်အရှားပါ….. ဒီနေရာမှာ ဘာလို့ သူတို့ကို ပန်းရောင် မှတ်ပုံတင် ပေးမကိုင်သလဲ….. ရှင်းနေပါတယ်… ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဆင်းသက်လာတဲ့ မူဂျာဟစ်က အသွင်ပြောင်း ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့ကို နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် မပေးနိုင်ပါဘူး…..
အများမသိသေးတဲ့ အချက်အနေနဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ရှီးယိုက် မွတ်စလင် ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ရှေးဘုရင်တွေ လက်ထက်ကပင် အေးအတူ ပူအမျှ နေထိုင်ကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေဟာ ဆွန်နီ မွတ်စလင်တွေ ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာပါပဲ….. ဘာသာ တူသော်လည်း ဂိုဏ်းကွဲခြင်း၊ ဂိုဏ်းတူသော်လည်း ပင်ကိုယ် ယုတ်မာသည့် စိတ်ဓါတ်အခံရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတို့ ရောက်သည့် နိုင်ငံတိုင်းတွင် ပြဿနာပေါင်းစုံ ဖြစ်သည်မှာ ပုံမှန်လို ဖြစ်နေပါတယ်…. အထူးသဖြင့် ဘာသာတူ မလေးရှားလို နိုင်ငံမှာပင် မလေးနိုင်ငံသူတွေကို ယူထားပြီး ကလေးနဲ့ တိုးလို့ တွဲလောင်း ပစ်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်….
ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်းတောရှိ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများအား အကူညီပေးနေသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ...
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:00
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဆိုသည်မှာ..... . All Rights Reserved